Home Wararka Mucaaridka, Dowlad Goboleedyada iyo Aqoonyahannada Somaliyeed Ha dhisaan Dowlad Badbaado Qaran.
Mucaaridka, Dowlad Goboleedyada iyo Aqoonyahannada Somaliyeed Ha dhisaan Dowlad Badbaado Qaran.
Kuraasta xildhibaanada ee aqalkii sare ayaa la ogaa sida xun ee ay ku soo baxeen, haddana waxaa la bilaabay si qorsheysan cabashada xildhibaanada golaha shacbiga ee Gobolada waqooyi oo boob lagu bilaabay kursigii ugu horreeyey.
Iyadoo taas lala fajacsan yahay ayaa waxaa soo baxday in Droneska dadka qaarna lagu dilo kuwa kalana dilka kuwaas cashar looga dhigo loo keensaday. Waxaa la diiday in caddaalad loo halo dacwadda Ikran, Marka intaas la isku soo daro ma ogaan karnaa waxaa laga sugayo dowladdaan waqtigeeda dhammaaday ee xil gaarsiinta ah iyo Madaxdweynaha waqtigiisu dhammaaday halka ay dalka ku wadaan? Haa waan ka ogaan karnaa tagtada la soo maray timaaddada soo socoto.
Dad badani maanta waa iska indha tirayaan ama waa is dabbaalinayaan inay ku dhawaaqaan inuusan dalka dowlad lahayn haba yaraatee. Rooble iyo Farmajo waa Dameer iyo dhagihiisa, waxayna labadooda noqdeen isku dan oo midkoodna doorasho dan uma arko ee waa in ay jiitantaa ilaa Febraayo 2022 oo la is warsan doono waxa dhaca haddii Farmajo loo daayo awood dhiska uu hadda ku jiro.
Farmajo waxaa uu hadda gacanta ku hayaa awood-dhisasho aan qarsooneyn sida Drones la soo iibsado, gawaari gaashaaman oo Turkiga laga codsado, Maleyshiyaad dhar ciidan wata oo diyaar u ah isaga, Erateriya oo soo wadda Ciidan kale, Qaraxa Itoobiya oo ay dunida ku sii jeesan doonto si ay kooxda Farmajo ay ougu fududaato inuu Xamar Xasuuq ka geysto, Qatar oo lacag dheeri ah u soo waddaa, lacag ka imanaysa xaraashka Batroolka ee maanta Imaaraadka ka socdaa, beesha caalamka oo macaankeeda iska dhuuqda iyo siyaasad xumada mucaaridka ayaa marqaati cad ah halka loo socdo ee hurdaayow toos hadda.
Wararka laga helayo madaxdtooyada ayaa sheegaya in go’aanku yahay inaan wax doorasho dhameystiran ah la aadi Karin ilaan bartamaha sannadka soo socda, waayo dhammaan inta hadda joogtaa ee doorashada gacanta ku haysaa waxaa u dan ah inay sii joogaan, waxaanad ka garataa:
Qaska iyo boobka lagu bilaabay doorashada golaha shacbiga.
Dacwadda Ikraan oo la sarriftay, kadibna meel la iska dhigay raadkeedana laga tirirayo.
Dagaallada Galmudug, Gedo iyo Hiiraan oo hadda la diyaarinayo sidii loo sii hurun lahaa kuwa socda, kuwa kalana loo billaabi lahaa.
Beesha Caalamka oo ku milantay dowladda Hadda joogtaa.
RW Rooble oo ay ku caddaatay inuu been u sheegay shacbiga oo hadda bilaabay sidii uu u xooleysan lahaa.
Hadda oo shidaalkii dalka lagu xaraashayo Abu Dhabi, si lacago bood-jebis iyo hawl fududeyn.
Intaan oo dhan waxay muujinayaan in kooxdaan ku heshiisay dalka inay dhacaan inaysan dowlad ahayn ee ay yihiin koox tuuganimo isku afgaratay dalkana meel xun wadda.
Haddaba iyadoo laga duulayo dhammaan inta aan soo sheegnay oo lagu daray xaaladda Itoobiya oo ay nagu soo fatahmi karaan qaxooti dalka oo dhan naga qaataa waxaa Khasab ah in loo baahan yahay:
In Mucaardika oo aan ahayn afartaan kursidoonka ah oo kaliya ee aqoonyahanka, ganacsatada oo aan shaki badan ka qabno iyo inta dalka u naxeysaa in ay shir deg deg ah isugu yimaadaan sida kuwa aItoobiya ay hadda sameeyeen kana tashadaan aayaha iyo badbaadinta dalka, maadaama Farmajo uu macalin u yahay Abiy Axmed oo dalkaas burbur xoog leh u wada.
In la dhiso dowlad KMG ah oo dalka doorasho gaarsiisa muddo kooban.
In Farmajo iyo Rooble looga saaro Madaxtooyada waddada ugu khasaaraha yar.
In beesha Caalamka iyo taloyinkeeda meel la iska dhigo oo la dhaqaaqo iyadaa ku soo biiri doonta kooxdii ay u arkaan inay dalka qabsanayaan.
Haddii kale dalkaan waxaa uu ku noqonayaa in mardhow reer waliba uu aag xerto oo hadda Somaliland ayaa maqane la helo qabiilo kale oo goosasho maciin mooda si ay uga badbaadaan inay dagaallada ku soo fatahaan.
Xusuustaan inay soo noqoto ma foga.